Wararkii ugu dambeyay dagaalo iyo banaanbaxyo saakay ka dhacay Baledweyne – Radio Damal
Wararkii ugu dambeyay dagaalo iyo banaanbaxyo saakay ka dhacay Baledweyne
Dadka ku dhaqan magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa saaka kusoo toosay dagaal u dhaxeyay ciidamada dowlada iyo kuwa uu hoggaamiyo Janaraal Xuud oo ka dhacay gudaha magaalada Baledweyne.
Dagaal ayaa yimid kadib markii ay gudaha usoo galeen magaalada ciidamada Janaraal Xuud kuwaas oo kasoo dhaqaaqay fariisinkoodii duleedka magaalada ku yaalay waxayna la wareegeen ciidanka qeybo muhiim ah oo ku yaala xaafadaha Xaawataako iyo Kooshin gaar ahaan afaafka hore ee garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif iyo Buundada Nuur Xawaad oo ah marinka ugu muhiimsan ee laga galo gudaha Baledweyne.
Inta la xaqiijiyay labo qof oo mid ka mid ah uu yahay shacab ayaa ku dhaawacantay dagaalka saaka ka dhacay gudaha Baledweyne iyo mid ka mid ah ciidamada Janaraal Xuud.
Dagaalka kadib waxaa magaalada Baledweyne ka dhacay banaanbaxyo xoogan oo ruxay guud ahaan magaalada Baledweyne kaasoo aay dhigayeen shacab ka careysan dagaalka saaka ka dhacay Baledweyne iyo waliba madaxda maamulka Hirshabeelle.
Xaalada ayaa ah wali mid kacsan waxaana kala xiran dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka ganacsiga guud ahaan xaafadaha Baledweyne.
Majirto wax war ah oo kasoo baxay dhanka maamulka gobolka Hiiraan oo ku aadan dagaalkii saaka iyo banaanbaxyadii looga soo horjeeday walow dhanka ciidamada Jabhada ay guulo ka sheegteen weerarkii saaka ka dhacay Baledweyne ayna ku sugan yihiin goobahii ay la wareegeen.